Halkee laga iibsadaa GPS - Geofumadas
Ogast, 2009 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka
Waxaan had iyo jeer weydiiyaa dukaanka aan kugula taliyo iibsashada qalabka GPS. Jawaabta ugu horreysa waa: raadso degeliye degaan oo dalkaada ka jira, haddii aad samayso iibsi gaar ah oo aad talo bixin.
Laakiin haddii aad horeyba u caddayn lahayd waxa aad rabto inaad iibsato oo kaliya waxa aad raadineyso waa qiimaha ugu hooseeya, markaa waxaa laga yaabaa in adeeg bixiyaha maxalliga ah uusan aheyn kuwa ugu dhaqaalaha badan. Iyada oo ku xidhan haddii aad haysato tartan kugu filan waxaad ku darsan kartaa qiimaha.
Xulashada iibsiga internetka ma aha fikrad xun, maanta waxaa jira tas-hiilaadyo badan oo si toos ah ugu iibsada dukaamada Maraykanka, oo leh qiimo fiican iyo dammaanad.
Tusaale ahaan tan waa Tiger GPS, oo bixiya adeegyo sida:
Saacadaha 30. Marka laga reebo damaanada guud ee soo saaraha soo saaraha, Tiger GPS wuxuu bixiyaa damaanad soo celin maalmaha 30.
Dammaanadda qiimaha ugu hooseeya. Waxay hubiyaan in haddii aad hesho qiimo hooseeya, ayadoon la eegin, meeshii ay ku hagaajin lahaayeen.
Noocyo kala duwan iyo noocyo. Waa suurtagal in la helo qalabka qalabka ah ee Garmin, Magellan, Tomtom, Delorme, Lowrance, iyo kuwo kale. Xitaa haddii qalabka dib loo dhiso, haddii ay tahay, ayaa lagu tilmaamay xaaladdan.
Keen meel kasta oo adduunka ah. Via UPS ama FedEex, haddii la iibsado ka hor 3PM, Waqtiyada Bariga ee Maraykanka, amarku wuxuu ka baxayaa isla maalintaas.
Hababka lacag bixinta. Waxay taageertaa lacag bixinta iyadoo la isticmaalayo kaarka deynta, oo ay ku jiraan Paypal.
Marka, haddii aad rabto inaad GPS iibsato, oo aad ogtahay waxa, alternative alternative xiiso leh waa in la soo xigto Tiger GPS.
Tag tiger GPS
Post Previous«Previous gvSIG 1.9 RC1, diyaar u ah inay kala soo bixi
Post Next Rootiyayaashu waxay u yimaadeen inay joogaanNext »
5 Jawaab ah "Xagee laga iibsan karaa GPS"
Silvio Herrera isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan ogaado qiimaha a
ee Miami, USA. Haddii ay jirto dalab waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado.
Dukaanka internetku waa mid aad u jaban oo maraakiibtu waa bilaash
http://licafashion.com , adeegga macaamiisha ayaa sidoo kale aad u fiican
Lluís isagu wuxuu leeyahay:
Haddii qofku uu xiiseynayo boggan internetka marka lagu daro iibinta gps online, koorsooyinka bilaashka ah ayaa la sameeyaa waqtiga iibka waxayna socotaa inta aad rabto. Ma weydiisan kartaa wax dheeraad ah?
josep maria isagu wuxuu leeyahay:
Website cusub oo gps, oo suurtogal ah in lacag la samaysto nidaam xiriir la leh, haddii aad xiiseyneysid inaad nala soo xiriirto,
PS: Anigu ma aanan helin foomka xiriirka
Waa mid aad u xiiso badan waana muhiim inaad ku darto dib u eegida gps si aad u hesho macluumaad badan oo ku saabsan qalabka.